မဒေါင်းလုပ် MediaMonkey မအဘို့ Windows
မအခမဲ့ မဒေါင်းလုပ် မအဘို့ Windows (15.54 MB)
MediaMonkey သည် iPod အသုံးပြုသူများနှင့် ပြင်းထန်သော တေးဂီတစုဆောင်းသူများအတွက် အဆင့်မြင့် ဂီတမန်နေဂျာနှင့် ပလေယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ OGG, WMA, MPC, FLAC, APE, WAV, MP3 ဖော်မတ်များဖြင့် CD များနှင့် အသံဖိုင်များကို ကက်တလောက်လုပ်နိုင်သော ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့်၊ သင်သည် အင်တာနက်ပေါ်ရှိ အခမဲ့ဒေတာဘေ့စ်များမှ အယ်လ်ဘမ်ပုံများနှင့် သီချင်းအချက်အလက်များကို အလွယ်တကူ ရယူနိုင်ပါသည်။ သင့်အား အလွန်အောင်မြင်သော ပူးတွဲပါဖိုင်တည်းဖြတ်သူအား ပေးဆောင်ပြီး အဆင့်မြင့် တက်ဂ်လုပ်ခြင်းစနစ်ကို အသုံးပြုခွင့်ပေးသည့် ပရိုဂရမ်သည် ၎င်း၏ အလိုအလျောက်ဖိုင်နှင့် ဖိုင်တွဲအမည်ပြောင်းခြင်းအင်္ဂါရပ်ဖြင့် သင့်ဂီတစာကြည့်တိုက်ကို ပိုမိုစီစဥ်အောင် ကူညီပေးပါသည်။
MediaMonkey သည် ၎င်း၏ CD ripper၊ CD/DVD burner၊ audio file format converter ဖြင့် သင့်တေးဂီတကို သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် အရန်ကူးခြင်းအတွက် လိုအပ်သမျှကို ရှာဖွေနိုင်ရာ၊ ၎င်းသည် သင်ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် အလိုအလျောက် ဖွင့်ရန်စာရင်းများကို ပြင်ဆင်သည့် ၎င်း၏ playlist တည်းဖြတ်သူများဖြင့် သင့်စိတ်ကြိုက်သီချင်းများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် လွယ်ကူစေသည်။ .
ပရိုဂရမ်၏ပလေယာ၏ထူးခြားသောအသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်မှုအင်္ဂါရပ်ဖြင့် အသံအဆင့်ကို အမြဲတစေ တူညီသောအဆင့်တွင်ထားရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ သင်သည် ဂီတရောနှောမှုများကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်သည်။ သီချင်းများ၏ အဆင့် ကွာခြားသော်လည်း ပရိုဂရမ်သည် သင့်အတွက် အဆင့်ကို ချိန်ညှိပေးသည်။ Winamp ပရိုဂရမ်၏အင်္ဂါရပ်များ၊ ပလပ်အင်များနှင့် အမြင်ရွေးချယ်စရာများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ဤပလေယာအစား MediaMonkey သည် သင့်အား Winamp ကို မူရင်းပလေယာအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် ခွင့်ပြုသည်။
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အသံကိရိယာများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် သင့်ကွန်ပျူတာရှိ မီဒီယာစာကြည့်တိုက်ကို iPhone၊ iPod၊ Walkman ဖုန်းများ သို့မဟုတ် အခြားသော ခရီးဆောင်ကိရိယာများနှင့် ထပ်တူပြုနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ အလွန်လျင်မြန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ဤပရိုဂရမ်ဖြင့်၊ သင်သည် စာသား serach အင်္ဂါရပ်ကို အပြည့်အဝ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုင်းငံ့စရာမလိုဘဲ အင်တာဖေ့စ်တစ်ခုတည်းတွင် သီချင်းပေါင်း 50000 ကျော်ကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေမည့် ဤအဆင့်မြင့်တေးဂီတမန်နေဂျာဖြင့်၊ သင်သည် သင်၏တေးဂီတကို အချိန်တိုင်းသိမ်းယူ၍ သိမ်းဆည်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
MediaMonkey4ဗားရှင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသော အင်္ဂါရပ်များ-
iPhone၊ iPad၊ iPod၊ Blackberry၊ Android ကဲ့သို့သော မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများနှင့် အလိုအလျောက် ထပ်တူပြုခြင်း။
သင်သည် သင်၏ xBox၊ PS3 သို့မဟုတ် DLNA တွဲဖက်သုံးနိုင်သော TV တွင် ဗီဒီယို သို့မဟုတ် ဂီတကို ဖွင့်နိုင်သည်။
၎င်းသည် UPnP ဆာဗာမှ မျှဝေထားသောကိရိယာများကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်အကြောင်းအရာကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အကြောင်းအရာကို ဒေါင်းလုဒ်မန်နေဂျာဖြင့် ဝဘ်ဆိုဒ်များမှ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
ဗီဒီယိုပြန်ဖွင့်ခြင်းအင်္ဂါရပ်ကို ထည့်သွင်းထားသည်။ အသံဖိုင်များကဲ့သို့ AVI၊ MP4၊ WMV ကဲ့သို့သော လူကြိုက်များသော ဗီဒီယိုဖော်မတ်များအားလုံးကို ဖွင့်ခြင်း၊ စင့်ခ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် တည်းဖြတ်နိုင်သည်။
ဤပရိုဂရမ်သည် အကောင်းဆုံး အခမဲ့ Windows ပရိုဂရမ်များစာရင်းတွင် ပါဝင်သည်။
မဖိုင်အရွယ်အစား: 15.54 MB
တီထွင်သူ: Ventis Media
8K Player သည်သင်၏ desktop ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်သင်သုံးနိုင်သောဗီဒီယိုဖွင့်စက်ဖြစ်သည်။...
ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာသိခဲ့သော Winamp ၏ Lite ဗားရှင်းသည်အထူးသဖြင့် netbook...
iTunes, အခမဲ့မီဒီယာဖွင့်စက်နှင့်အက်ပလီကေးရှင်းကို Mac နှင့် PC တို့အတွက်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး၊...
RealPlayer Cloud သည် ဗီဒီယိုများကို သိမ်းဆည်းသည့် သုံးစွဲသူများအတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသော cloud...
PMPlayer သည် ရိုးရှင်းပြီး malware ကင်းစင်သော မီဒီယာပလေယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Windows လည်ပတ်မှုစနစ်ဖြင့်...
QuickTime Player သည် Apple မှ ဖန်တီးထားသော အောင်မြင်သော မီဒီယာပလေယာဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ရိုးရှင်းသော...
CherryPlayer သည် အသံနှင့် ဗီဒီယိုဖိုင် အမျိုးအစားတိုင်းနီးပါးကို ဖွင့်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်...
Light Alloy သည် အသုံးပြုရလွယ်ကူသော၊ ရိုးရှင်းသောအင်တာဖေ့စ်နှင့် အဆင့်မြင့်ဖော်မတ်ပံ့ပိုးမှုဖြင့်...
MediaMonkey သည် iPod အသုံးပြုသူများနှင့် ပြင်းထန်သော တေးဂီတစုဆောင်းသူများအတွက် အဆင့်မြင့်...
နာမည်အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း AVI Media Player သည် AVI extension ဖြင့် ဗီဒီယိုဖိုင်များကို...
Zoom Player MAX သည် Windows လည်ပတ်မှုစနစ်ရှိသော ကွန်ပျူတာများအတွက် အဆင်ပြေပြီး...
သင်အင်တာနက်ကိုရှာဖွေနေစဉ် သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် စာမျက်နှာများရှိ ပစ္စည်းအများအပြားကို...
Ace Stream သည် သာမန်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများနှင့် မာလ်တီမီဒီယာလောက၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့ဝင်များအတွက်...
BSPlayer သည် AVI, MKV, MPEG, WAV, ASF နှင့် MP3 ကဲ့သို့သော အသံနှင့် ဗီဒီယိုဖိုင်အားလုံးကို...
GOM Audio သည် ခေတ်မီပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော မီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်တွင် သင့်အသံဖိုင်များကို...